Dhaqanka Siyaasadeed iyo Sifooyinka Farmaajo iyo Trump ka siman yihiin!! – Idil News
Dhaqanka Siyaasadeed iyo Sifooyinka Farmaajo iyo Trump ka siman yihiin!!
Posted By: Idil News Staff January 7, 2021
Hal Xisbi ayay ka wada tirsanaayeen, Doorasho xor ah iyo xukunka oo si nabad ah la isugu dhiibana doqonimo ayay u arkaan. Kursi Jacaylka iyo Kaligii Taliyenimaduna waa u sii dheertahay.
Dadka oo dhan in ay ka caqli badanyihiin ayay isku heystaan, in wax laga sheegana dambi ayay u arkaan, shar iyo kheyr wixii ay la yimaadaana in lagu taageero ayay jecelyihiin.
Dadka taageera waxay u badanyihiin CARUUR IYO CAAMO aaminsan sheekooyin khurraafi ah oo aaminsan in ay yihiin Owliyo Ilaahey iyaga u soo diray, hadii aan la adeecina balaayo aan la arag oo la maqal dalka iyo dadka ku dhacayso, dibna loo noqonayo boqolaal sano.
Qabyaaladeynta, kala qaybinta bulshada, dadkoo qowmiyado iyo qolo qolo la isugu diro iyo kuwa xididka la ah oo awoodda dowladnimo lagu naasnuujiyo.
Labadoodaba waxa loo dhiibay dal dimuquraadi ah oo si nabad ah xukunka la isugu dhiibo, maanta waxa laga dhexlayaa dal qowmiyad iyo qabiil qabiil qoorta iskula jira, hay’adihii dowlada laga aamin baxay, haybadii dowladnimadana ay burburtay!
Maraykanku waa dal hay’ado dowladeed oo sal adag u dhisanyihiin, lkn Farmaajo hada waxa uu ka shaqaynayaa nidaamka dowladeed curdunka ah ee noo dhisan in uu naga dumiyo, dalka iyo dadkana dagaal sokeeye ku qasbo, kadibna diyaarad ka raaco!